ရုတျတရကျ ကှယျလှနျသှားတဲ့ သူ့ရဲ့အားအကိုးရဆုံး အရေးပျေါဝနျကွီးဈာပနမှာ ဟနျမဆောငျနိုငျလောကျအောငျ ဝမျးနညျးပကျလကျဖွဈခဲ့တဲ့ ပူတငျ(ဗီဒီယိုဖိုငျ)
ရုရှားသမ်မတပူတငျဟာ အင်ျဂါနကေ့ သဆေုံးသှားခဲ့တဲ့ အရေးပျေါဝနျကွီး Yevgeny Zinichev ကို ဝမျးနညျးကွကှေဲစှာနဲ့ နှုတျဆကျခဲ့တယျလို့ ရုရှားမီဒီယာတှကေ ဖျောပွခဲ့ပါတယျ။ အသကျ ၅၅ နှဈအရှယျ အရေးပျေါဝနျကွီးဟာ အာတိတျဒသေမှာ လကေ့ငျြ့မှုတှပွေုလုပျနစေဉျအတှငျး ရိုကျကူးရေးသမားဖွဈသူကို ကယျတငျဖို့ကွိုးစားရာကနေ သဆေုံးခဲ့တာလညျးဖွဈပါတယျ။… ပူတငျရဲ့ အားကိုးရသူတဈဦးလို့ သိရကာ ရုရှားအတှကျ နှဈပေါငျးမြားစှာ အဆငျ့မွငျ့ရာထူးတှကေို ထမျးဆော ငျခဲ့သူလညျးဖွဈပါတယျ။ပူတငျဟာ ရုရှားနိုငျငံအလံ တျောလှမျးခွုံထားတဲ့ အရေးပျေါဝနျကွီးရဲ့ အခေါငျးကို
ခေါငျးနဲ့နှဈကွိမျတိုငျတိုငျထိပွီး ဦးညှတျခဲ့ကာ ကနျြရဈခဲ့တဲ့ ဇနီးသညျ၊ သားဖွဈသူတို့ကိုလညျး တှဆေုံ့နှုတျဆကျခဲ့တယျလို့ သိရပါတယျ။… သူဟာ အခေါငျးကို ၂ကွိမျတိုငျတိုငျဖှငျ့ကာ ကွညျ့ရှုခဲ့ပွီး အဝေးကိုထှကျသှားခဲ့ရာမှာတော့ စိတျရှုပျထှေးနဟေနျပေါကျနတေယျလို့ Daily Mail က ဆိုပါတယျ။ အစားထိုးမရတဲ့ ဆုံးရှုံးမှုတဈခုဖွဈတယျလို့ ပူတငျက ပွောဆိုခဲ့ကွောငျးသိရပွီး ရဲရငျ့သနျမာကာ သတ်တိနဲ့ပွညျ့ ဝသူတဈဦးလို့ ခြီးကြူးခဲ့ပွောဆိုခဲ့ကွောငျးလညျး ဆိုပါတယျ။…. ပူတငျဟာ Zinichev ကို ရုရှားနိုငျငံရဲ့ အမွငျ့ဆုံးဂုဏျပွုဆုဖွဈတဲ့ ရုရှားသူရဲကောငျးဘှဲ့ထူးကို ပေးအပျခဲ့တယျလို့လညျး
သိရပါတယျ။ ပူတငျဟာ Zinichev ကို သူ့ရဲ့နရောဆကျခံမယျ့သူအဖွဈတောငျမှ ထညျ့သှငျးထားတယျလို့ တခြို့က ယုံကွညျနပွေိး ကရငျမျလငျနနျးတျောရဲ့ လုံခွုံရေးကောငျစီမှာလညျး ထိပျတနျးရာထူးကို ပေးအပျခဲ့ကာ သူတို့နှဈဦးကွား ဆကျဆံရေးက တျောတျောလေးနကျရှိုငျးတယျလို့လညျး သုံးသပျကွပါတယျ။ ထှကျပျေါလာခဲ့တဲ့ ဓာတျပုံတှအေရ ပူတငျဟာ
တျော တျောလေးဝမျးနညျးကွကှေဲနဟေနျရှိပွီး စြာပနအခမျး အနားတလြှောကျလုံး စိတျမသကျမသာဖွဈနတောကို မွငျတှခေဲ့ရပါတယျ။ အရေးပျေါဝနျကွီးဟာ ရထေဲပွုတျကခြဲ့တဲ့ ရိုကျကူးရေးသမားကို ကယျတငျဖို့ ဒိုကျဗငျထိုးဆငျးခဲ့ရာကနေ ကြောကျဆောငျနဲ့ တိုကျမိပွီးသဆေုံးခဲ့ရတာဖွဈတယျလို့ ဆိုပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ ရဟတျယာဉျနဲ့သယျဆောငျကာ ဆေးရုံပို့ဆောငျစဉျအတှငျးမှသာ သဆေုံးခဲ့တယျဆိုတဲ့ ဖျောပွမှုတှလေညျး ရှိနပေါတယျ။
ရုတ်တရက် ကွယ်လွန်သွားတဲ့ သူ့ရဲ့အားအကိုးရဆုံး အရေးပေါ်ဝန်ကြီးဈာပနမှာ ဟန်မဆောင်နိုင်လောက်အောင် ဝမ်းနည်းပက်လက်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ပူတင်(ဗီဒီယိုဖိုင်)
ရုရှားသမ္မတပူတင်ဟာ အင်္ဂါနေ့က သေဆုံးသွားခဲ့တဲ့ အရေးပေါ်ဝန်ကြီး Yevgeny Zinichev ကို ဝမ်းနည်းကြေကွဲစွာနဲ့ နှုတ်ဆက်ခဲ့တယ်လို့ ရုရှားမီဒီယာတွေက ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ အသက် ၅၅ နှစ်အရွယ် အရေးပေါ်ဝန်ကြီးဟာ အာတိတ်ဒေသမှာ လေ့ကျင့်မှုတွေပြုလုပ်နေစဉ်အတွင်း ရိုက်ကူးရေးသမားဖြစ်သူကို ကယ်တင်ဖို့ကြိုးစားရာကနေ သေဆုံးခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။… ပူတင်ရဲ့ အားကိုးရသူတစ်ဦးလို့ သိရကာ ရုရှားအတွက် နှစ်ပေါင်းများစွာ အဆင့်မြင့်ရာထူးတွေကို ထမ်းဆော င်ခဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပူတင်ဟာ ရုရှားနိုင်ငံအလံ တော်လွှမ်းခြုံထားတဲ့ အရေးပေါ်ဝန်ကြီးရဲ့ အခေါင်းကို
ခေါင်းနဲ့နှစ်ကြိမ်တိုင်တိုင်ထိပြီး ဦးညွှတ်ခဲ့ကာ ကျန်ရစ်ခဲ့တဲ့ ဇနီးသည်၊ သားဖြစ်သူတို့ကိုလည်း တွေ့ဆုံနှုတ်ဆက်ခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။… သူဟာ အခေါင်းကို ၂ကြိမ်တိုင်တိုင်ဖွင့်ကာ ကြည့်ရှုခဲ့ပြီး အဝေးကိုထွက်သွားခဲ့ရာမှာတော့ စိတ်ရှုပ်ထွေးနေဟန်ပေါက်နေတယ်လို့ Daily Mail က ဆိုပါတယ်။ အစားထိုးမရတဲ့ ဆုံးရှုံးမှုတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ ပူတင်က ပြောဆိုခဲ့ကြောင်းသိရပြီး ရဲရင့်သန်မာကာ သတ္တိနဲ့ပြည့် ဝသူတစ်ဦးလို့ ချီးကျူးခဲ့ပြောဆိုခဲ့ကြောင်းလည်း ဆိုပါတယ်။…. ပူတင်ဟာ Zinichev ကို ရုရှားနိုင်ငံရဲ့ အမြင့်ဆုံးဂုဏ်ပြုဆုဖြစ်တဲ့ ရုရှားသူရဲကောင်းဘွဲ့ထူးကို ပေးအပ်ခဲ့တယ်လို့လည်း
သိရပါတယ်။ ပူတင်ဟာ Zinichev ကို သူ့ရဲ့နေရာဆက်ခံမယ့်သူအဖြစ်တောင်မှ ထည့်သွင်းထားတယ်လို့ တချို့က ယုံကြည်နေပြိး ကရင်မ်လင်နန်းတော်ရဲ့ လုံခြုံရေးကောင်စီမှာလည်း ထိပ်တန်းရာထူးကို ပေးအပ်ခဲ့ကာ သူတို့နှစ်ဦးကြား ဆက်ဆံရေးက တော်တော်လေးနက်ရှိုင်းတယ်လို့လည်း သုံးသပ်ကြပါတယ်။ ထွက်ပေါ်လာခဲ့တဲ့ ဓာတ်ပုံတွေအရ ပူတင်ဟာ
တော် တော်လေးဝမ်းနည်းကြေကွဲနေဟန်ရှိပြီး ဈာပနအခမ်း အနားတလျှောက်လုံး စိတ်မသက်မသာဖြစ်နေတာကို မြင်တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ အရေးပေါ်ဝန်ကြီးဟာ ရေထဲပြုတ်ကျခဲ့တဲ့ ရိုက်ကူးရေးသမားကို ကယ်တင်ဖို့ ဒိုက်ဗင်ထိုးဆင်းခဲ့ရာကနေ ကျောက်ဆောင်နဲ့ တိုက်မိပြီးသေဆုံးခဲ့ရတာဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ရဟတ်ယာဉ်နဲ့သယ်ဆောင်ကာ ဆေးရုံပို့ဆောင်စဉ်အတွင်းမှသာ သေဆုံးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ ဖော်ပြမှုတွေလည်း ရှိနေပါတယ်။
ခေါင်းကို သေနတ်ဒင်နဲ့ လွှဲရိုက်ခံရတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့လူနာတင်ကားမောင်းလို့တဲ့။အရှင်လတ်လတ် မီးရှို့သတ်ခံရတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ ကင်းစောင့်လို့တဲ့။………….